उपेन्द्र यादवको नक्कली नागरिकता सार्वजनिक, उमेर मात्र १७ वर्ष ! - Everest Dainik - News from Nepal
उपेन्द्र यादवको नक्कली नागरिकता सार्वजनिक, उमेर मात्र १७ वर्ष !
काठमाडौं, कात्तिक १८ । संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवको नागरिकताकाे फाेटाे सार्वजनिक भएकाे छ । उनकाे उमेर १७ बर्ष भएको खुल्न आएको छ ।
उनको नागरिकता सार्वजनिक भएसँगै नागरिकतामा उमेर १७ बर्ष उल्लेख गरेको भेटिएको हो । भगतपुर सप्तरी जन्मिएका भनिएका यादव स्थायी बासस्थान सुनसरी भएकाले उनले सुनसरीबाट नागरिकता लिएका छन् । नागरिकतामा उमेरको ठाँउमा साल, महिना, गते नभएर १७ बर्ष मात्र लेखिएको छ ।
यसले उनको उमेर अब पनि १७ बर्ष मात्र हो की कहिलेसम्म १७ बर्ष भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
एक जना पत्रकारले उक्त नागरिकताको फोटोलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै लेखेका छन् । ‘उपेन्द्र यादव भन्दा पनि दीनानाथ लम्साल नामधारी सरकारी जागिरे बाहुन चिन्न मन छ ।
याे पनि पढ्नुस निर्वाचन सार्ने हर्कत भए देश धरापमा पर्छ: अध्यक्ष यादव
बधाइ छ, म भन्दा १८ वर्ष कान्छो उम्मेदवार तराईले पाएकामा । अब देश युवाले हाँक्ने हो जादवजी । उनले ब्याङ्ग्यात्मक शब्द प्रयोग गरेका छन् । उपेन्द्र यादबको नागरिकतामा प्रकाशकीय अधिकृत दीनानाथ लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बारम्बार सांसद उम्मेद्वार र मन्त्री बनिसकेका यादवको नै नागरिकता यस्तो हुनु रहस्यमय छ । यसले के अर्थ दिन्छ ? छुट्याउने जिम्मा पाठककै ।’
याे पनि पढ्नुस उपेन्द्र यादवसंगकाे सहमति प्रचण्डको हातमा